Ukuphupha kweeMveli Discover Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Bomthonyama ngabemi baseOstreliya. Baqala ukwenza ikholoni i-Australia malunga neminyaka engama-50.000 1788 eyadlulayo. Njengabanye abantu abaninzi bomthonyama, Aborigines bahlupheke ngenxa yokufuduka "komlungu", kule meko amaBritane. Bafika e-Australia ngo-XNUMX, beza nezifo kwaye baphanga 'uBushman' amalungelo abo kunye nendawo yokuhlala. Yayingama-Bhritane anika izizwe zaseIndiya igama eliqhelekileyo elenza ukuba nguMthonyama.
Imbali ephikisanayo yabomthonyama inokuchaphazela nokuba aba bantu babonakala kuthi njengophawu emaphupheni ethu. Mhlawumbi kwimeko yamaphupha sifumana imilo phakathi kwabomthonyama nabamhlophe. Mhlawumbi kwimeko yokuphupha siza kuhamba kuphela siye e-Australia kwaye sidibane nabemi Bomthonyama apho, sitshintshisane ngezimvo nabo okanye sibabone bezingela kunye nee-boomerangs zabo. Athetha ntoni loo maphupha? Utolika njani umfanekiso wephupha "Bomthonyama"?
1 Uphawu lwephupha «Aboriginal» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Aboriginal» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Aboriginal» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Aboriginal» - Ukutolikwa ngokubanzi
Imeko yamaphupha, apho umntu aya e-Australia kwaye athethe naBemi Bomthonyama balapho, ishiya umbono omkhulu ngokwenkcazo jikelele yephupha. ukuthetha phandle gqiba. Lowo uleleyo unomdla kwezinye iinkcubeko nakwindlela yokuphila. Unyamezelo kwaye uvulelekile kutshintsho ebomini bakhe.
Ngokutsho kohlalutyo lwamaphupha ngokubanzi, nabani na ophupha ngokuphila njengomthonyama e-Australia ulangazelela enye indlela elula yobomi. Kule meko, uphawu lwephupha lubonisa ukuba umntu ophuphayo ufuna ukwaphula imigaqo kunye nemilinganiselo elawula ubomi bakhe bobuchwephesha. Uziva unyanzelekile kwaye unoluvo lokuba awukwazi ukukhula ngokukhululekileyo.
Umfanekiso wephupha «Aboriginal» ufuzisela isidingo sokugxila kuphela ngaphakathi, imvakalelo yendalo ukumamela kunye nokuqonda into "engaphucukanga" yesiqu, yasendle ngengqondo ebanzi.
Amaphupha apho kukho, njengembali, umlo onobundlobongela phakathi kwabeMi Bomthonyama nabaseBritane, ekubhekiswa kuwo ekuchazeni ngokubanzi amaphupha. inkohlakalo. Kwimeko enjalo, uphawu lwephupha alumkisi nje kuphela ngokulandela ngokungenanceba iimfuno zomntu kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba omnye ukwicala labomthonyama kwimeko yamaphupha, umfanekiso wephupha uyalumkisa, nangona kunjalo Ubuzwe ngokusebenzisa abanye.
Uphawu lwephupha «Aboriginal» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokusebenza kwengqondo ekutolikeni amaphupha, uphawu "lwabomthonyama" lubhekisa kwezo zingenakuguqulwa. Iinxalenye zobuntu bakho. Oku kuthetha, umzekelo, ithuku, iimfuno zokuphembelela kunye neemvakalelo ezinamandla.
Kusenokwenzeka ukuba lo mntu kuthethwa ngaye ufuna ukubanakho ukunika ezi mpawu kunye neendawo zakhe ngakumbi ebomini. Uyarhalela LibertadAkafuni kuziguqula ebomini okanye afune ukucinezela iimpawu zakhe. Ngokwe-psychoanalysts, oku phantse kuhlala kuhamba kunye nokuzazi.
Uphawu lwephupha «Aboriginal» - ukutolika kokomoya
Kutoliko lwamaphupha ngokwasemoyeni, abeMi Bomthonyama babhekisa njengomqondiso wephupha. Inkqubo yokudala. Abantu bemveli ke ngoko benza unxibelelwano phakathi kwabantu nendalo.